Mampitombo ny fiatraikany amin'ny filokana sy filokana amin'ny Internet | Avy amin'ny Linux
Mampitombo ny fiatraikany amin'ny filokana sy ny filokana amin'ny Internet ny teknolojia maimaimpoana
Luigys toro | | About us
Vitsy ny indostria ankehitriny no mandeha haingana toy ny filokana sy filokana amin'ny Internet. Izay nahena ho efitrano iray isaky ny tanàna, ankehitriny dia manolotra safidy marobe ho an'ireo tia vola mora sy adrineineina vokarin'ireny karazana lalao ireny. Ao amin'ny tsena iray izay mitombo ny filan'ny vokatra, serivisy ary fahalalana, mipoitra ny teknolojia maimaim-poana handresy ny tsena manerana ny planeta. Eto izahay dia milaza aminao izay tokony ho fantatrao momba izany.
Raha mpankafy ny lalao misy amin'ny filokana ianao nefa matahotra ny isan'ny olona mety ho hitanao ao, dia mety ny vahaolana amin'ny Internet ny vahaolana. Ity tongotra eo amin'ny latabatra filalaovana midadasika ity dia mahazo tombony bebe kokoa amin'ny hafa ary heverina ho iray amin'ireo indostria manana fitomboana mitombo indrindra amin'ny taona ho avy. Ity fomba fijery mamporisika ity dia mitaky ny fampiasam-bola eran'izao tontolo izao ary misy ny mpamorona loharanom-baovao misokatra nahita ity toerana miroborobo eto amin'ity faritra ity mba hampiroborobo ny vahaolana, mampivelatra ny fahalalany manokana amin'io lafiny io izay mirongatra izao.
Amin'izay lalana izay dia mipoitra ny karazana microservices isan-karazany sy ny fampiharana open source izay manam-pahaizana manokana amin'ny fanomezana vahaolana amin'ireo sehatra filalaovana, miainga amin'ny script kely izay manome toky fa ny latabatra casino amin'ny Internet dia tsy azo vonoina amin'ny algorithma hikajiana mandeha ho azy ny tombam-bidin'ny mpandraharaha. Toy izany koa, misy serivisy loharano misokatra marobe izay natokana ho an'ny mpilalao, izay ahazoana miasa ho an'ny famakafakana ny filalaovana, ny faminaniana ny valiny na ho an'ny statistika ankapobeny fotsiny.
Amin'izao fotoana izao dia efa misy sehatra lalao isan-karazany mihazakazaka amin'ny linuxNa amin'ny milina fanao mahazatra sy any amin'ireo filokana an-tserasera malaza be, amin'ity farany ity dia lehibe kokoa ny fiantraikan'ny teknolojia maimaim-poana, satria ny ankamaroan'ireo dia mihazakazaka amin'ny tranokala maimaim-poana izay nampiantranoina tamin'ny rafitra fiasa GNU / Linux , ankoatry ny fampiasana rafitra, fiteny fandefasana programa ary tahiry izay maimai-poana.
Na dia, hatramin'ny 2012 aza, ny filokana amin'ny Internet dia tsy hetsika voafehy tanteraka, ny fitomboana lehibe nananan'ny sampana tao anatin'ny filokana dia nanery anay hamerina handinika ilay olana ary hamoaka lalàna amin'ity lafiny ity, ary koa hanatsara ny fahaizan'ny teknikan'ny sehatra, toy izany koa, nampitombo ny tranga ny marefo ary ny mpilalao dia nanatsara ny fahafahany mampifanaraka ny fanaon'ireo lalao ireo. Ny fahombiazan'ny efitrano virtoaly dia tsy maintsy nalain'ny vondron'olona rindrambaiko maimaimpoana, mba hahazoana loharanom-bola vaovao ary hampalaza ny fampiasana azy ireo.
Iray amin'ireo sehatry ny haitao manodidina ny filokana izay misy ny teknolojia maimaimpoana eo amin'ny fampiharana ho an'ny antoko fahatelo, tsy isalasalana fa mifandraika amin'ny zava-misy fa ny 40% -n'ny tombom-barotra ankehitriny amin'ny Internet dia azo avy amin'ny finday avo lenta, noho izany dia faritra tsy ijanonan'ny fivoaran'ny teknolojia ary tsy maintsy havaozina tsy tapaka.
Ny teknolojia maimaimpoana dia sarobidy, ankoatry ny faritra hafa, ao anatin'ny tontolon'ny cryptocurrency mba hialana amin'ny bubble goavambe izay mipoaka eo imasontsika, ary koa mampiasa an'ity loharanom-bola vaovao ity hanombohana ny famatsiam-bola ireo tetikasa vao misondrotra sy manavao.
Ireo haitao maimaimpoana ampiasaina amin'ny filokana dia tsy misy fialonana amin'ny teknolojia fananana izay ampiasaina amin'ny filokana lehibe manerantany. Amin'ny ankapobeny, rehefa misokatra ny casino lehibe any amin'ny firenena vao misondrotra dia heno fa misy ny haitao maimaimpoana mitaona mivantana ny olany amin'ny cyber, noho izy ireo nahazo laza malaza teo amin'ny sehatra. Ohatra, misy tranokala mandinika ireo teknolojia ireo sy izay rehetra manohana ny asa mahazatra an'ny casino amin'ny ankapobeny.
Fantatrao izao, raha mieritreritra ny hiditra amin'ny tontolon'ny trano filokana sy trano filokana an-tserasera ianao, dia tadidio ny fizahana ny vaovao farany amin'ny haitao maimaimpoana sy tranokala manokana ao aminy. Ity asa teo aloha ity dia hanampy anao hahalala eo alohan'ny ankamaroan'ny mpifaninana aminao fampahalalana sarobidy be dia be.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Mampitombo ny fiatraikany amin'ny filokana sy ny filokana amin'ny Internet ny teknolojia maimaimpoana
Avadiho ho lasa Operating System mety ho an'ny Digital Mining ny GNU / Linux anao